Lahatsoratra nataon'i Brooke Kovanda momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Brooke Kovanda
Brooke Kovanda dia mpandrindra Orr Fellow & Marketing ao amin'ny PERQ, orinasam-teknolojia fampiroboroboana any Indianapolis. Any izy no mitondra atiny sy famoronana famoronana ho an'ny vokatra doka, ary manome fanohanana amin'ny fikarohana sy fikarohana vaovao momba ny tsena vaovao. Ivelan'ny asa dia tian'i Brooke ny mamaky, mivezivezy, mihaino ny Rock 'n' Roll mahazatra.
Ny fiantraikan'ny fotoana kely eo amin'ny dia an'ny mpanjifa
Zoma, Febroary 10, 2017 Alatsinainy 13 Febroary 2017 Brooke Kovanda
Ny fironana ara-barotra mafana izay nanomboka nahenoantsika bebe kokoa momba izany dia fotoana fohy. Ny fotoana mikraoba dia mitaona ny fitondran-tena sy ny zavatra andrasana amin'ny mpividy, ary manova ny fomba fivarotan'ireo mpanjifa manerana ny indostria izy ireo. Fa inona marina no atao hoe fotoana bitika? Amin'ny fomba ahoana no mamolavola ny dian'ny mpanjifa? Zava-dehibe ny mahatakatra ny maha-zava-baovao ny hevitra momba ny fotoana fohy eo amin'ny tontolon'ny varotra nomerika. Mieritrereta miaraka amin'i Google no mitarika ny fikarohana amin'ny fomba fanavaozan'ny teknolojia smartphone